किन पुग्छन् नेपालीहरु टोगो ?- विविधा - कान्तिपुर समाचार
किन पुग्छन् नेपालीहरु टोगो ?
वैशाख ६, २०७५ नवीन रायमाझी
काठमाडौँ — केही वर्ष पहिले राष्ट्रिय योजना आयोगका एक पुर्व उपाध्यक्षले पंक्तिकारसँग विदेश जाने प्रसंगमा भनेका थिए, 'सजिलै जान पाए नेपालीहरु चन्द्रलोक पनि पुग्थे ।'
उनको भनाइ कोही पनि विदेश नजाउन भन्ने थिएन र कोही विदेश गएकोमा उनलाई डाहा पनि होइन । उनको चिन्ता बिभिन्न देशमा पुगेर नेपालीहरुले पाएको अनावश्यक दु:खतर्फ इंगित थियो । उनका अनुसार बिश्वमा कैयौं यस्ता साना र धनी देशहरु छन्, जुन देशमा त्यहाँका नागरिकलाई काम पनि छ र उनीहरुको जीवनस्तर पनि उच्च छ, तर कुनै बिदेशी नागरिक गएर जीवनयापन गर्न कठिन छ, कडा अध्यागमन नियम र भाषाको कारण । करिब ५० भन्दा बढी देश पुगेका उनका अनुसार कोष्टारिका त्यस्तै देश हो । त्यहाँका नागरिकको जीवनस्तर यति लोभलाग्दो छ कि हामीले सपनाको देश भन्ने गरेको अमेरिका, जापान र बेलायतका मध्यम वर्गीय नागरिक पनि लोभिन्छन् ।
यसै सन्दर्भमा अमेरिका वा क्यानडा लग्ने भनेर करोडौँ रुपियाँ ठगेर बेपत्ता भएको, अमेरिका लग्ने भनेर अर्कै देशमा लगेर बन्धक बनाएर फिरौती उठाएको वा त्यहीं अलपत्र पारेर छोडेको, बिदेशमा काम गर्ने ठाउँमा खानसम्म नदिएर कुटपिट गरेको वा तलब नदिएको, बिदेशमा बेखर्ची भएर अलपत्र भएको जस्ता नकारात्मक समाचारले राम्रै स्थान पाएको छ । यस्तो समाचारले पीडित व्यक्ति परिचित नभए पनि मानवताको नाताले जो कसैको पनि मन चसक्क हुन्छ । यस्तो किसिमको दु:ख अज्ञानता र लोभको कारणले हुनेमा दुई मत नहोला । तर यो अबस्था कसरी आउँछ भन्ने मेरो व्यक्तिगत अनुभव यहाँ प्रस्तुत गर्न चाहन्छु ।
पंक्तिकारको एक आफन्तको छोरालाई अमेरिका जाने रहर लाग्यो । उसलाई एउटा मान्छेले आफु सिनेमा निर्माता भएको र नयाँ सिनेमा शुटिङ गर्न अमेरिका जान लागेको, जापान र नर्वेमा शुटिङ गरिसकेको कारणले अमेरिकाले भिषा दिनेमा कुनै शङ्का नभएको र कलाकार टोलीमा मिसाएर उसलाई पनि अमेरिका लगिदिने प्रलोभन दियो । करिब १५ लाख रुपियाँ बुझाए सजिलै अमेरिका जान पाइने र त्यहाँ गए पछि त्यो रकम एक वर्षमै उठ्ने सपना देखेर उसले आफ्नो बावुआमालाई उक्त कुरा सुनायो । जीवनमा अनेकौं शिशिर बसन्त देखेर परिपक्क भएका बावुआमाले यस्तो हावादारी कुरालाई विश्वास गर्ने कुरा आएन । उनीहरुले यो प्रस्तावलाई अस्वीकार गरिदिए । ठग मानव तस्करले "ब्रेन वास" गरेको उसले अब आफ्नो प्रगति हुन लागेकोमा बावुआमाले नै अड्चन पैदा गरेको आरोप लगाउँदै दैनिक घरमा किचकिच गर्न थाले । त्यसपछि बाबुआमा हैरान भएर उसको अंश बापत २० लाख रुपियाँ दिने तर अब उप्रान्त उसले कुनै हक दाबी गर्न नपाउने शर्तमा उसलाई त्यो रकम दिए । उसले त्यसबाट १५ लाख रुपियाँ त्यो कथित सिनेमा निर्मातालाई दियो । दुई महिनाभित्र अमेरिका जानको लागि तयार रहन भनेर गएको त्यो निर्माता त्यसपछि कता गयो उसले भेट्न सकेन, पैसा पनि गयो र सपना पनि चकनाचुर भयो । बि.सं. २०५८ सालमा २० लाख रुपियाँ निकै ठुलो रकम हो । ठगको चिप्लो कुरामा लाग्दा बेकारमा पाटिको बास हुन पुग्यो, सामाजिक रुपमा गरिने व्यंग्य त अलग्गै भयो । यो एउटा बर्बादीको सानो उदाहरण मात्र हो, अनुसन्धान गर्यो भने यस्तै किसिमका बर्बादीमा सामाजिक बिचलन कति आएका छन् कति, तर त्यो सतहमा आउँदैन ।
केही समय पहिले अमेरिका लग्ने भनेर टर्कीमा लगेर बन्धक बनाएको र बन्धकका परिवारले फिरौती दिएपछि मुक्त गरेको तथा अफ्रिकी मुलुक टोगोमा लगेर अलपत्र पारिदिएको दुई बेग्लाबेग्लै समाचार आएको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय अपराधिक गिरोहसँग मिलेर एउटा नेपालीले अर्को नेपालीलाई पीडित बनाउने कुरा जति सुन्दा नरमाइलो लाग्छ, त्यो भन्दा बढी यस्तो मनगढन्त कुरामा विश्वास गर्दा अरु कति ठगिएका होलान् भन्ने जिज्ञासा लाग्छ । त्यस्तै अधिकांश नेपालीहरुले नामसमेत नसुनेको देश टोगो जाने नेपालीलाई मुर्ख भन्ने कि अरु नै केही भन्ने? नेपालीलाई अमेरिका जान नेपालबाट मात्रै सम्भव छ, अर्को देशबाट होइन, अपबादलाई छोडेर ।
अब प्रसंग टोगोको, सन् २०१६ मा पंक्तिकार नयाँ दिल्ली गएको थियो । करोलबागको एउटा होटलमा आराम गरिरहेको बेला तल रिसेप्सनबाट कोही भेट्न आएको खबर आयो, को आएछ भनेर अच्चम मान्दै तल आएको त कालो बर्णका दुई जना अपरिचित व्यक्तिहरु मलाई पर्खेर बसिरहेका थिए । मैले म तपाईं हरुलाई चिन्दिन भन्दा उनीहरुले हामी टोगोको दुताबासबाट आएको र एक लाख भारतीय रुपियाँ मा आफ्नो देशको भिसा लगाइदिने र टोगोबाट अमेरिका वा क्यानाडा जता जान पनि सजिलो हुने प्रस्ताव राखे, जीवनमा पहिलो पटक नाम सुनेको देशको भिसा होटल बाटै लाग्ने सुनेर मलाई आश्चर्य लाग्यो । होटलको रिसेप्सनिस्टका अनुसार उनीहरु यसरी नै होटल होटल नेपाली खोज्दै हिड्ने र कुरा मिल्यो भने ठाउँको ठाउँ भिषा लगाइदिने रहेछन् । यसरी खोज्दै जाँदा उक्त होटलमा पनि नेपाली बसेको थाहा पाएर उनीहरुले मलाई पनि अमेरिका वा क्यानडा जान खोजेको नेपाली होला भनेर जाल हाल्न खोजेका रहेछन, मैले उनीहरुलाई म यस्तो बिषयमा इच्छुक नभएको भनेर फ़र्काइदिएँ । अब विचार गरौँ, यसरी होटलमै भिषा पाइने देश कस्तो होला र यस्तो क्रियाकलाप उनीहरुले दुताबास कै निर्देशनमा गरेका होलान् कि लुकिचोरी गरेका होलान?
यस्तै खाडी मुलुकमा घरायसी कामको लागि गएका नेपाली महिलालाई घर मालिकले खान नदिएको, कुटपिट गरेको, पहिले भने जति तलब नदिएको वा तलब नै नदिएको, यौन शोषण गरेको जस्ता नकारात्मक समाचारहरु पनि बाक्लै आउने गरेका छन् । फेसबुकलगायतका सामाजिक सञ्जालहरुमा महिलाहरुले रुँदै आफ्नो कथाब्यथा भनेको भिडियो पनि यदाकदा हेर्न पाइन्छ । काम गर्न लगेको मान्छेले कामदारलाई बिना कारण खान नदिएर कुटपिट मात्र गर्यो होला भन्ने कुरामा कति बिश्वास गर्न सकिन्छ, तर मलाई भने बिश्वास लाग्दैन । यदी कसैले त्यस्तो गर्छ भने त्यो पागल हुनु पर्छ । कतै यस्तो घटना घट्नुमा हाम्रो आफ्नै कमजोरी त छैनन्? यो संसारमा अगाडी बढ्नको लागि हात नै चलाउनु पर्छ केवल मुख मात्र चलाएर पुग्दैन अर्थात श्रम जस्तो प्रमुख र ठुलो कुराको बिकल्प छैन । जसले जति मेहनति भने पनि बास्तवमा हामी अल्छी छौं, लगनका साथ काम गर्नमा भन्दा काम गरेको जस्तो गरेर समय कटाउनमा हामीलाई विश्वास लाग्छ । जसले काम गर्नुलाई दु:ख गर्नु भन्छ, त्यो एक नम्बरको कामचोर र अल्छी हो भन्ने पंक्तिकारको बुझाइ छ । यदी लगनशीलताका साथ काम गर्दा गर्दै पनि तलब नदिने वा यौन शोषण गर्छ भने त्यो अमानवीय तथा गैरकानुनी क्रियाकलाप हो, त्यसको लागि हरेक देशमा कारबाही गर्ने निकायहरु छन् । त्यसैकारण नेपालबाट विदेश जाने बेला मै सबैकुरा बुझेर जानु उचित हुन्छ र म के काम गर्न जान लागेको, त्यो काम मैले कति गर्न सक्छु र काम गरेबापत कति पारिश्रमिक पाउने हो । सबै कुरा सम्बन्धित व्यक्तिले पनि बुझ्न जरुरी छ । हाम्रो अर्को समस्या भनेको कुरा गर्ने बेलामा हामीलाई आकाश नै खसाल्दिन सकिन्छ जस्तो लाग्छ तर काम गर्ने बेलामा भने त्यसको ठ्याकै उल्टो हुन्छ । यसको साथै बुझ्दै नबुझी अरुको कुराको विश्वास गर्ने तथा भाषाको समस्याले सबै कागजपत्र पढ्न नसक्दा पनि यस्ता समस्याहरु सिर्जना हुन सक्छन् ।
सम्पुर्ण बिश्व नै एउटा गाउँमा रुपान्तरण हुन लागेको आजको युगमा एक देशबाट अर्को देशमा जानु भनेको एक शहरबाट अर्को सहरमा जानु जस्तै साधारण कुरा हो । यसलाई कुनै महान रुपमा हेर्नु पनि छैन र देश प्रेमको रुपमा पनि हेर्नु हुँदैन अर्थात् विदेश जाने बितिकै देशको माया नभएको होइन । आफ्नो वृत्ति विकास हुन्छ र हालको भन्दा माथिल्लो जीवनस्तर पाइन्छ भने देशको माया लाग्छ भनेर विदेश नगएर देशमै बस्नु कुनै बुद्धिमानी होइन । तर, मौका नपाएको कुरालाई स्वीकार गर्न नसकेर देशको मायाले बिदेश नगएको भन्नु पाखण्डीपना हो । यसको साथै कुरै नबुझी वा खतरा मोलेर विदेश जाने तर आफ्नो दाउ तल पर्ना साथ सरकारले हेर्नुपर्ने माग पनि त्यति उक्तिसंगत लाग्दैन । बाँकी सर्बज्ञाता पाठकहरुको आलोचना र सुझाब सँधैको जस्तो स्वीकारीय नै छ ।
प्रकाशित : वैशाख ६, २०७५ १७:०८